Fallout from financial turmoil in Argentina having a huge impact on travel | Argentina travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eArgentina » Ukuwa kwisiphithiphithi sezemali eArgentina esinefuthe elikhulu kukhenketho
Ukuwa kwisiphithiphithi sezemali eArgentina esinefuthe elikhulu kukhenketho
Ukubhukisha indawo ephumayo kwawa emva kokuba iPeso yengozi ngoMeyi kwaye uMongameli waseArgentina uMacri wacela i-IMF ukuba ibuyise. Ukubhukishwa kohambo ukusuka eArgentina ukuya kwamanye amazwe aseLatin America (anesona sabelo sikhulu sohambo oluphumayo eArgentina, kwiipesenti ezingama-43) kuye kwanyamalala ngonyaka-ngama-26.1%.
Ukuwa kwezidubedube zezemali zaseArgentina kunempembelelo enkulu ekuhambeni nasekubuyeni kweli, ngokwamanani akutshanje aphume phambili ForwardKeys oqikelela iipateni zokuhamba zexesha elizayo ngokuhlalutya ukuthengiselana kwezigidi ezili-17 ngosuku.
Itotali yokubhukisha okuphuma kumazwe angaphandle kwehle ngama-20.4%, kwaye kubonisiwe ngokunyuka nge-8.4% phakathi kukaJanuwari no-Epreli. Ezinye iindawo ekutsalwa kuzo zibethwa kakhulu yi-US kunye ne-Canada ezantsi nge-18.2%, kunye neCaribbean, behla nge-36.8%. Zonke zibonise ukwanda ukuya ku-Epreli.
I-Chile ibeka phambili uluhlu lwamazwe abonisa ukuwa okukhulu kunokubhukishwa kwenqwelomoya ukusuka eArgentina unyaka nonyaka, kwehle ngama-50.6%. ICuba iphantsi ngama-43.2%.
Iziphumo zibonisa ukuba awona mazwe anokuchaphazeleka kukuwa kweArgentina, ngenxa yesabelo sabo sentengiso, yiBrazil, iParaguay, iUruguay kunye neChile, zilandelwa yiBolivia, iPeru, iCuba kunye neColombia.
IArgentina nayo iyasokola ukwehla ngaphakathi kwabahambi baseLatin America abanoloyiko malunga nobunzima bezoqoqosho. Ukubhukisha okwenziwe ngoMeyi bekuphantse kwaba li-14% kwezo zenziwe ngoMeyi kunyaka ophelileyo.
Ukujonga phambili, iingxaki zaseArgentina zimiselwe ukuqhubeka njengoko ilizwe lisokola ukufumana unyango lwezoqoqosho. Ukubhukisha ukufika ngoJuni ukuya kuAgasti kusemva nge-4.9% kunyaka ophelileyo. Ukubhukisha eBrazil kuphela kushiyeke nge-9%.
Asiyedwa iArgentina; ubunzima bayo buchazwa kwimbonakalo yokhenketho yeLatin America kunye neCaribbean xa iyonke, apho ukubhukisha ngoJuni, Julayi nangoAgasti kungange-2.0% ngasemva konyaka ophelileyo. KuMbindi Merika, ukuwohloka kubangelwe ikakhulu zizidubedube zaseNicaragua kunye neentaba-mlilo eGuatemala. KwiiCaribbean ezinye iindawo zisasokola ukubuyela kwinkanyamba zamva nje. I-Chile kunye neCuba ziye zabethwa ngooyeba bemarike yabo ebalulekileyo, eArgentina.
Umphathi we-ForwardKeys nomseki-mbumba, u-Olivier Jager, uthe: “Bendise Buenos Aires kwiinyanga nje ezimbini ezidlulileyo kwaye yonke into ibixokozela kodwa ngequbuliso, iArgentina iye yafumana ubutyebi obubi kakhulu. Kwiinyanga ezine zokuqala zalo nyaka, ukukhula kuzo zombini ukungena kunye nokuphuma kokuhamba kwakusempilweni kakhulu kodwa ngoMeyi yonke into yatshintsha. Ngokwesiqhelo ukuhla kwemali yelizwe kuya kukhokelela ekunyukeni kokubhukisha njengoko indawo esiya kuyo iba lixabiso elibonakalayo kubakhenkethi bamanye amazwe. Nangona kunjalo, ukwehla okunzima okubangelwa yingxaki yoqoqosho lwasekhaya kunye nezopolitiko, kunokuba nefuthe elichaseneyo kwaye kubeke iindwendwe, ubuncinci kwixesha elifutshane. Ndinqwenela ukuba ndingakhomba kwi-rebound kodwa akukho bungqina buncinci ngoku. ”